Biden oo amray in lagu war-galiyo howl-gallada Soomaaliaya | KEYDMEDIA ONLINE
Biden oo amray in lagu war-galiyo howl-gallada Soomaaliaya
Milatariga iyo hay'adda sirdoonka Mareykanka ayaa lagu amray in aysan wax howl-gal ah ka fulin karin, gudaha Soomaaliya iyaga oo aan fasax ka helin Aqalka Cad ee looga taliyo Mareykanka.
WASHINGTON, USA – Madaxweynaha dhawaan la doortay ee Joe Biden ayaa ku amray Milatariga iyo Hay'adda Sirdoonka Mareykanka in aysan ka fulin karin weerar aan lagu wargalin Aqalka Cad gudaha Soomaaliya.
Sida ay qorayaan warbaahinta Mareykanka, Joe Biden ayaa doonaya inuu wax ka baddalo, siyaasaddii Ciidan ee Donald Trump ku wajahayay la dagaalanka Kooxda Al-Shabaab.
Maamulkii Donald Trump ayaa xilliyo kala duwan lagu eedeeyay in ciidamadiisu dad shacb ah iyo Xoolo ku dileen gudaha Soomaaliya, Joe Biden ayaana doonaya inuu ka fogaado, howl-gallo aan hubanti buuxda heysan.
Joe Biden, wuxuu doonyaa in howl-gal kasta noqdo mid ku wajahan bar-tilmaameed sax ah, ka hor inta aan la qaadinna lagu war galiyo Aqalka Cad.
Amar ka soo baxay Madaxweynihii hore Donald Trump ayaa billaawgii sanadkaan guud ahaan ciidamadii Mareykanka looga saaray Soomaaliya, hayeeshee sirdoonka Mareyganka ayaa wali duqeymo ka geysata dalka.
Sida la xaqiiyiyay Maamulkii Trump ayaa afartii sano ee xukunka uu joogay wuxuu Soomaaliya ka fuliyey 276 howlgal oo isugu jiray duqeymo circa iyo dhulka ah, halka AFRICOM ay 205 howlgal sheegteen.